आज बाला चतुर्दशी, पशुपतिमा शताबीज छर्नेको भीड
प्रकाशित मिति : बिहिबार, मंसिर २०, २०७५
काठमाडौँ/ आज बाला चतुर्दशी । मृतकका नाउँमा शतबीज छरी पितृउद्धार गर्ने दिन । आजकाे दिनलार्इ कृष्ण चतुर्दशी पनि भनिन्छ ।
बालाचतुर्दशी नेपालमा मानाइने एक परम्परागत पर्व हो । जुन विभिन्न मन्दिरहरूमा शतबीज (शतबीउ) छरेर मनाईन्छ । सनातन हिन्दू धर्म अन्तर्गत पर्ने थुप्रै चाडपर्व मध्ये बालाचतुर्दशी पर्वको छुट्टै एवं विशिष्ट महत्त्व रहेको पाइन्छ ।
प्रत्येक वर्षको हेमन्त ऋतुको मार्गकृष्ण चतुर्दशीमा पर्ने बालाचतुर्दशी पर्वलाई शतबीज रोपण पर्व पनि भनिन्छ । यो पर्व विशेषगरी पितृहरूको उद्धारको निम्ति उनीहरूको सम्झनामा मनाइन्छ ।
मार्गकृष्ण त्रयोदशीको साँझमा उपत्यकाको पशुपतिनाथ लगायत अधिराज्यका अन्य शिवालयमा दीप प्रज्वलन गरी रातभरि जाग्राम बसी भोलिपल्ट अर्थात् चतुर्दशीको दिन शतबीज रोपण गरिन्छ । त्रयोदशीको राति दिवङ्गत पितृको सद्गतिको कामना गर्दै देशभरका शिवालयहरुमा महादीपदान गर्ने चलन रहेकाे छ । साेही अनुसार बुधबार राति पनि पशुपतिलगायत देशभरिका शिवालयमा भक्तजनको ठूलाे भीड लागेको छ ।
पशुपतिनाथ मन्दिरमा बुधबार बिहानैदेखि महादीपदान गर्ने भक्तजन आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेर बसेका थिए । बाला चतुर्दशीका अवसरमा पशुपतिमा लाखौँ भक्तजनको भीड लाग्ने भएकाले भक्तजन ठाउँ ओगट्न बसेका हुन् ।
यस वर्ष बाला चतुर्दशीमा पशुपति आउने भक्तजनका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले त्रिपालको व्यवस्था गरेको सदस्य सचिव डा प्रदीप ढकालले बताए । बुधबार राति महादीपदान गर्ने र भोलिपल्ट अर्थात अाज बिहीबार बिहान शतबीज छर्ने भक्तजनका लागि सुरक्षा लगायत प्रबन्ध गरिएको पनि कोषले जनाएको छ ।
त्रयोदशीका दिन दीपदान गरी चतुर्दशीका दिन बिहान धानको सय गेडा पशुपति क्षेत्रको मृगस्थलीमा छरेमा अक्षय पुण्य प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता छ । पशुपतिसँगै उपत्यकाका गोकर्णेश्वर, वसन्तपुरस्थित सानो पशुपतिनाथ भनेर चिनिने शिवालयलगायत देशभरका शिव मन्दिरमा भक्तजन दिवङ्गत पितृका नाममा बत्ती बालेर बसेका थिए भने अाज शतबीज छर्दैछन् ।
के हाे शतबीज, किन छर्ने ?
बोलीचालीको भाषामा सद्बीउ छर्ने भनिने शतबीजरोपणले पितृहरूको उद्धार हुन्छ भन्ने जनविश्वास रही आएको छ । अन्य शिवालयभन्दा पशुपतिनाथमा गरिने शतबीज रोपणको ठूलो महिमा बताइएको छ । यसैकारण पनि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका मानिसहरू आफ्नो पितृहरूको उद्धार गर्ने उद्देश्यले पशुपति परिसरमा आइपुग्छन् ।
पशुपतिनाथमा छरिने शतबीजको महिमा बताउँदै हेमादि्रले भनेका छन्- ‘सुवर्णरतिकातुल्यं ब्रीहिमेकं परिक्षिपेत् मृगस्थलीं परिभ्रम्य पुनर्जन्म न विद्यते ।’ नेपालीमा ‘शतम्’को अर्थ सय र ‘बीज’को अर्थ बीउ हुन्छ । यसरी शतबीज भन्नाले सयथरी बीउ भन्ने बुझिन्छ । तर पनि शतबीजमा मुख्यतः धान, जौ, गहुँ, चना, तिल, कागुनु र मकैलाई मात्र लिइने गरेको पाइन्छ ।
यसैगरी शतबीजको मिश्रणमा केरा, उखु, सुन्तला, अनार, भोगटे, कागती, निबुवा, बिमिरो, अमला आदि फलका साथै विभिन्न किसिमका फूलहरू पनि हुने गर्दछन् । यसैगरी शतबीजमा आफ्नो स्थानीय फलफूल पनि मिसाइन्छ ।
यस अवसरमा नेपालका विभिन्न स्थानबाट आएका भक्तजनहरूको बिहानैदेखि काठमाण्डौको पशुपतिनाथको मन्दिरमा सतबीज छर्न ठूलो भीड लाग्छ । आफ्नो परिवारका दिवंगत आत्मालाई शान्ति दिलाउन १०८ शिवलिङ्गा कैलाश, सूर्यघाट, गौरीघाट, आर्यघाट, गुह्येश्वरी, पशुपति, मृगस्थली, विश्वरूप मन्दिर, किराँतेश्वर मन्दिर आदि ठाउँमा सतबीज छरिन्छ ।
राष्ट्रपतिले खिचाइन नो फोटो जोनमा तस्वीर, चारैतिर आलोचना
संविधान संशोधन अघि नबढाए सरकारमा टाँसि रहँदैनौं : महासचिव यादव
बगानका आन्दोलनकारीहरु भन्छन “मुन्टो लुकाएका सुतुरमुर्गहरुहरुलाई समात्नमात्र बाँकी छ ।”
नयाँ समृद्ध नेपालको समाज निर्माणका लागि सुहाउँदो सांस्कृतिक जग खोजौँ !
रामेछापमा तारा एयरकाे विमान दुर्घटना
आज १४९औं लेनिन जयन्ती, विश्वभर उनको सम्झना गरिँदै (संक्षिप्त जीवनी)
नुवाकोट–रसुवा अन्टुफको संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न
अन्टुफ–जिफन्टले प्रदेश पाँचमा १३० औं मई दिवस संयुक्त मनाउने निर्णय